Renaissance (kafushane). incazelo emfushane Renaissance
History of the Renaissance iqala ekhulwini XIV. Nokho kulesi sikhathi libizwa Yempucuko. Imvuselelo eyabuyiselwa Europe Medieval isiko futhi waba walowo isiko New Age. A Renaissance yaphela ngo XVI-XVII eminyaka, njengoba wonke amazwe ke inosuku lokuqala futhi isiphetho.
Nasi ulwazi olujwayelekile
izici zayo Yenguquko - kuyinto anthropocentrism, ukuthi kuyinto esithakazelweni esingavamile esasiboniswa ntu njengoba umuntu futhi ibhizinisi lakhe. Lokhu kuhlanganisa umlingisi wokuziphilisa isiko. Emphakathini, kukhona isithakazelo isiko lasendulo, kukhona into efana "ekuvuselelweni" zalo. Ngakho, empeleni, kwenzile igama le nkathi ebalulekile yesikhathi. abavelele Yenguquko kungenziwa ngokuthi okungenakufa Michelangelo, Nikkolo Makiavelli futhi njalo siphile ngezindinganiso uLeonardo da Vinci.
Renaissance (kafushane izici eziyisisekelo ezichazwe kulesi sihloko) uye washiya isigxivizo yayo ngemibono namasiko kuwo wonke amazwe aseYurophu. Kodwa ezweni ngalinye kukhona umuntu imingcele zomlando inkathi. Futhi zonke - ngenxa ukuthuthukiswa komnotho kanye nesimo senhlalo ukungalingani.
Renaissance sekukhona e-Italy. Lapha izibonakaliso zakhe kuqala zazibonakala e XIII-XIV eminyaka. Kodwa ebambelela ngokuqinile kuphela ngenkathi 20-yalolucwaningo kwekhulu xv. EJalimane, eFrance nakwamanye amandla Renaissance eyavela kamuva. Ekupheleni kwe-XV ekhulwini uwela le zezimbali eliphakeme Yenguquko. Futhi Ekhulwini leminyaka elizayo, uthi inhlekelele imibono ngenkathi. Ngenxa yalokho, kwaba khona ngesenzakalo kwenzeka baraque futhi banomkhuba.
Kuyini lokhu inkathi
I ngeNkathi Yenguquko - inkathi lapho ushintsho iqala kusukela medieval umphakathi izinduna ukuze wobunxiwankulu. Lona isigaba yomlando, lapho ubudlelwane wobunxiwankulu-capitalism abangazange okwamanje owabunjwa, izisekelo zenhlalo-izinduna ziye zazamazama.
Phakathi Renaissance, ke uqala ukwakha isizwe. Ngalesi sikhathi, amandla amakhosi, ngokusekelwa izakhamuzi ezivamile wakwazi unqobe amandla yezikhulu amakhosi asendulo. kuphela kusuka yezakhi womhlaba kuze kube kulesi sikhathi kwaba inhlangano okuthiwa, ngokuthi isimo. Manje kuphakama ohlanga ezinkulu, izisekelo zazo ziwukudalelwa kazwelonke kanye zomlando.
I Renaissance libhekene nokuthuthukiswa omkhulu ubudlelwane ukuhwebelana kwamazwe. Phakathi nale nkathi, uzibophezele kakhulu ngohambo lwasolwandle enkulu ukutholakala. Renaissance baba isikhathi lapho izisekelo kwezinkolelo-mbono zesayensi yesimanje avulwa. Ngakho, kwaba khona isayensi ezenzweni zabo nokwatholakala. Eyakwenza washintsha inqubo echazwe yiyona ukutholakala kokunyathelisa. Futhi-ke luqhuba kanjani Renaissance inkathi.
Okunye impumelelo the Renaissance
I Renaissance kafushane libhekene impumelelo okusezingeni eliphezulu ezincwadini. Ngenxa obhekwe ukuyiprinta Ufika ukusakaza labo amathuba, okuyinto ababengenamandla okukuthola ngaphambili. Imibhalo yesandla yasendulo esasivele njengomuntu phoenix emlotheni ziqala ukuba kuhunyushelwe ezilimini eziningi futhi zibhaliwe. Ziya emhlabeni wonke njengoba fast naphakade. Inqubo yokufunda sekulula kakhulu nge ikhono nokuzala ephepheni ezihlukahlukene impumelelo kanye nobuchwepheshe ngokwesayensi.
nabafisa ukuzovakasha endulo kanye cwaningo kwalesi sikhathi uyoboniswa phezu amasiko enkolo nezindlela zengqondo. Emlonyeni Kaluchcho Salutatti, Shansela we-Florentine Republic, asho khona la mazwi imiBhalo akalutho kodwa izinkondlo. Esikhathini Renaissance iNkantolo Yamacala Ezihlubuki ifinyelela iqophelo umsebenzi wayo. Kwakuhlangene yokuthi isifundo esinjalo ngokujulile imisebenzi lasendulo kungayilulaza ukuba nokholo kuJesu Kristu.
Ukutholakala kwesifo ekuqaleni kanye High Renaissance
Izici the Renaissance enzelwe ngelesibili nezikhathi the Renaissance khona. Ngakho, kubhekiselwa kuyo yonke inkathi, ososayensi zihlukaniswe Okuqala High Renaissance Revival. Isikhathi sokuqala eyathatha iminyaka engu-80 - kusukela 1420 kuya 1500. Phakathi nalesi sikhathi, ubuciko ayikahlanganiswa bekhululiwe ngokuphelele kusukela izinsalela esidlule, kodwa baye bazama ukuhlanganisa nabo izakhi lathathwa endulo classical. ngemva kwesikhathi eside kakhulu kuphela, kancane kakhulu abaculi, ngethonya izimo isinyathelo esinqala sokushintsha amasiko ukuphila, senqabe kusukela eNkathini Ephakathi futhi izisekelo ngaphandle ulahlwa unembeza sebeqala ukusebenzisa wakudala.
Kodwa konke lokhu kwenzeka e-Italy. Ngamanye amazwe, ubuciko isikhathi eside wayeyizwa Gothic. Kuphela ekupheleni kwekhulu xv Renaissance iqala eSpain emazweni esenyakatho ye-Alps. Lapha, zisandakuqala le nkathi uyaqhubeka kuze kube maphakathi nekhulu XVI. Kodwa kuwufanele lutho ukunakwa akukabonakaliswa ngalesi sikhathi.
I okusezingeni eliphezulu Renaissance
Inkathi Yenguquko yesibili kubhekwa isikhathi ewumbukwane ukhona. Renaissance okuphezulu futhi yathatha iminyaka engu-80 (1500-1580). Phakathi nale nkathi, inhloko-dolobha art iRoma, hhayi Florence. Konke lokhu kwaba kungenzeka ngenxa ummango beya esihlalweni sobukhosi uPapa uJulius II. Kwaba eyayinesifiso sokuvelela. Wabuye wayaziwa ngokwethembeka kwakhe futhi umoya ebhizinisi. Nguye bakhangwa enkantolo yakhe okungcono abaculi Italy. Lapho Julia II futhi owamlandela esakhiwe lenqwaba sculpting omkhulukazi olubunjiwe ebaziwe okungenakuqhathaniswa, nemidwebo ezibhaliwe futhi imidwebo, iziphi namanje kubhekwa obukhulu kuzo empucukweni yomhlaba.
Izinkathi Renaissance art
Renaissance imibono abangu owawusekelwe ubuciko naleso sikhathi. Kodwa ngaphambi sikhuluma art ngokwayo, ngingathanda ukugqamisa izigaba eziyinhloko. Ngakho, uqaphele Protorenessans noma lokungeniswa isikhathi (cishe iminyaka 1260-1320) duecento (XIII v.) Trecento (XIV Art.) Futhi Quattrocento (xv Art.) Futhi Cinquecento (XVI Art.).
Yiqiniso, ukulandelana imingcele eminyaka akusho ngempela ehambelana up ne izigaba ezithile sokuthuthukisa amasiko. Protorenessans kwaphawula ukuphela kwekhulu XIII, Early Renaissance izophela 1490, ngokulandelana, njengoba High Renaissance bome out phambi 1530 sika. Kuphela Venice, uyaqhubeka khona ngisho ngaphambi kokuphela kwekhulu XVI.
Renaissance izincwadi - kulamagama kokungafi njengezidalwa uShakespeare, Ronsard, Lorenzo Val, Petrarch, Du Bellay nabanye. Kwakuphakathi izimbongi Renaissance wabonisa ukunqoba lwesintu phezu ngamaphutha abo futhi amaphutha esikhathini esidlule. I amaningi kwaba izincwadi eJalimane, eFrance, e-England, eSpain nase-Italy.
On ezincwadini nasemasikweni amaNgisi futhi wathonywa kakhulu nangabanye izinkondlo of Italy nemisebenzi classical. Thomas Ueyatt wethula uhlobo Sonnet, okuyinto kuhle okusheshayo kuyanda. Futhi uthola ukunakwa Sonnet, wadala u-Earl of Surrey. Umlando Literary of England kuka e eziningi esifana izincwadi isiFulentshi, nakuba zifana incane.
izincwadi German the Renaissance liyaziwa Schwanks uvele kule nkathi. Kuyinto izindaba kujabulisa futhi kumnandi abokuqala wadala ngesimo izinkondlo, futhi kamuva - ku temibhalo yephrozi. Babexoxa ngokuphila, ngokuphila kwansuku zonke kwabantu abavamile. Konke lokho kwangiphatha ngakhonza isitayela ukukhanya, ukudlala futhi wabeka-back.
French Literature, eSpain nase-Italy
Renaissance izincwadi French kuphawulwa izitayela ezintsha. UMargarita Navarrskaya waba umvikeli we imibono ngeNkathi Yezinguquko nobuntu. E-Fulansi, kuqhame ekuqaleni ukuya lokusungula kazwelonke nasemadolobheni.
I Renaissance (ngamafuphi lingatholakala ku-athikili yethu) e Spain sehlukaniswe nezikhathi eziningana: Ngasekuqaleni Renaissance, High Renaissance futhi Baroque. Kuyo yonke inkathi engaphambi kwaleli zwe namanye kuye kunakwa isiko kanye nesayensi. ESpain, ukuthuthukisa journalism, kukhona imidwebo. Abanye abalobi Ziyathandelana izisusa nemibono yezwe zobuntu zenkolo.
Abamele Italian Renaissance zemibhalo Francesco Petrarca futhi Dzhovanni Bokkachcho. Kwakumelwe izimbongi ngowokuqala izithombe sublime nemicabango waqala ukuveza ulimi esisobala inhlamba. Lokhu emisha owayedunyiswa yimpumelelo futhi wawusufike kwamanye amazwe.
Renaissance and Art
Izici the Renaissance - wukuthi yomzimba womuntu iye abe ekuqaleni ugqozi ezinkulu isihloko esifundwayo sikhathi abaculi. Ngakho, ukugcizelela kunikezwa ukufana ebaziwe ngidwebe nesenzakalo esingokoqobo. Izici eziyinhloko the Renaissance art uyalandisa Ukubengezela ifa elicwengiweyo ibhulashi, isithunzi umdlalo futhi ukuhlolisisa ukukhanya ukusebenza kanye nokusungulwa ezinzima. Ngoba abaculi Yenguquko babe izithombe main ezivela eBhayibhelini futhi izinganekwane.
Esikhathini Umdwebo Renaissance zifana ka wangempela ngomfanekiso wakhe on a ngendwangu ethile kwakuthandeka ukuze umlingiswa oqanjiwe kubonakale uyaphila. On the art kwekhulu lamashumi amabili, asikwazi wathi.
I Renaissance (kafushane Amathrendi zako ezisemqoka echazwe ngenhla) beqonda umzimba womuntu ngokuthi i ekuqaleni elingapheli. Ososayensi kanye abaculi njalo ngcono amakhono abo nolwazi ngokutadisha umzimba womuntu. Khona-ke, kunombono ovamile wokuthi umuntu wadalwa ngomfanekiso futhi ngomfanekiso kaNkulunkulu. Lesi sitatimende ubonisa ukungabi nasici emzimbeni. Izinhloso eziyinhloko futhi ebalulekile Renaissance art were.
Imvelo nobuhle zomzimba womuntu
Renaissance art ulinakile kakhulu nemvelo. Izakhi sici landscape bekulokhu izimila ahlukahlukene futhi aluhlaza. Ezulwini tint blue, okuyinto elangena imisebe yelanga, okuyinto zingene phakathi kwamafu esimhlophe okwasemuva elihle ngokubabazekayo izidalwa olundizela phezulu. Renaissance art akhothame phambi ubuhle umzimba womuntu. Lokhu kubonakala ikakhulukazi izici ezicashile kwemisipha emzimbeni. ukuma ngingakhululeki, isimo sobuso nokushukuma komzimba, ehleleke kahle futhi ecacile umbala Palette lokusungula semvelo sawo Okugweda kanye Okugweda kwesikhathi Renaissance. Lezi zihlanganisa Titian, uLeonardo da Vinci, Rembrandt nabanye.
Kantemirovskaya Division - igama esabekayo okhazimulayo
KwamaNazi. Uyini kwamaNazi zokugcina
Umlando ruble. Kanjani ruble
AmaTatar. Umsuka wegama isizwe
UVladimir Yakovlevich Petruhin: Biography nesithombe
Valois (Dynasty). Umlando France
Vyacheslav Molchanov - guitarist brilliant
Kungani amakati musa ziye wanyathelwa ngezidladla? Asizwise lokhu!
Ikhukhamba anosawoti. Russian zokupheka zokupheka
Opel Calibra: Ukucaciswa, izithombe kanye nokubuyekeza
Amaqiniso simbe. amaqiniso Okumangalisayo futhi simbe zomhlaba: Top 10
Umlingisi uPetru Gorin: Biography
Saint-Eugene: ethempelini, isithonjana, ngomthandazo
Kuvele biography ezithakazelisayo Ilya Reznik futhi indlela yakhe yokuphila
Kusho ukuthini ephusheni sokumba? Dream ncwadi izochachiswa
"Milan": amaphuzu okuhlanzeka kwesifazane
"13 Ghosts" movie. Abalingisi kanye izindima